Yaa ku Dhiiro Galiyay inuu Tuuro Rigooradii Xalay Aubameyang - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Yaa ku Dhiiro Galiyay inuu Tuuro Rigooradii Xalay Aubameyang
Yaa ku Dhiiro Galiyay inuu Tuuro Rigooradii Xalay Aubameyang
Weeraryahanka Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ayaa shaaca ka qaaday in rigoorada uu dhaliyay xalay ay ka caawisay inuu kasoo kabsado niyad jabkii uu ka qaaday rigooradii uu qasaraiyay kulankii deriskooda North London derby ay ku wajaheen Tottenham
Aubameyang ayaa si lama filaan ah u seegay rigoore muhim ah kulankii Tottenham Hotspur Isbuucii hore markaaasoo Arsenal ay lumisay fursad ay kaga sara mari laheyd kooxda ay ku xafiiltamaan Waqooyiga London.
Xiddigii hore ee Borussia Dortmund ayaa ahaa mid cajiib ah ka dib markii uu kooxiisa ku hogaamiyay guul 2-0 ah oo ay ka gaareen Man Utd.
Weeraryahanka reer Gabon ayaa si la yaab leh uga soo kabsaday rigooradii uu qasaariyay toddobaadkii hore, isagoo sidookale sabab u noqday in guuldarrdadii ugu horeysay horyaaalka soo garato tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Ninka Arsenal ayaa kalsooni badan ka muujiyay inuu iska iloway niyad jabkii Spurs, madaama uu ku guuleystay inuu shabaqa soo taabto kulan ay saddex dhibcood lumisay kooxdiisa.
“Waan ku kalsoonahay, asxaabteyda ayaa i siiyay kalsooni, Lacey wuxuu i siiyay rigoorada, dhab ahaantii diirada ayaan saarnaa wax badan inana qabano, waxaan sameeyay qalad kulankii Tottenham,” ayuu u sheegay Sky Sports ka dib ciyaarta.
Previous articleArsenal oo u dhaqaaqday kaalinta 4aad
Next articleDhageyso:-RW Kheyre oo fariin u diray Shacabka Kismaayo